सबैको साथ र समर्थनले हाम्रो जित सुनिश्चत छ- महेश धिताल | खुल्लापाना
खुल्ला पानासिन्धुपाल्चाेक २०७९ बैशाख २१, बुधबार (२ हफ्ता अघि) २३८ पटक पढिएको
आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै आइसकेको छ । निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरू आ–आफ्नो नारा बोकेर घरदैलोमा पुगिरहेका छैनन् । यसै सन्दर्भमा सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका वडा नं. ७ मा नेकपा एमाले पार्टीको तर्फबाट युवा उम्मेदवार महेश धिताल चुनावी मैदानमा छन् । उनी आफैं आफ्नै ठाउँमा कृषि कर्म गरि स्वरोजगार बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने उद्यमशील युवा हुन् । आफ्नो ठाउँको विकास र समृद्धिको लागि युवा आफैं जागरुक हुनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्ने धितालसँग खुल्लापानाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
कस्तो छ चुनावी माहोल? गाउँ डुलीरहनुभएको छ । के भन्छन् मतदाता ?
चुनावी माहोल एकदम राम्रो छ । युवालाई प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने प्रतिकृया धेरै मतदाताको छ । हिजो सामाजिक क्षेत्रमा काम गरिरहँदा यो मान्छेले कुनै गलत क्रियाकलाप गरेको छैन, त्यसैले यो मान्छेलाई जिताउँदा राम्रो हुन्छ भनेर प्रतिक्रिया आइरहेको छ ।
भर्खरको युवा एकैपटक वडा अध्यक्षको लागि उम्मेद्वारी दिनुभएको छ । पूर्व अनुभव केछ ? वडाको जिम्मेवारी बहन गर्न सक्नुहुन्छ?
मैले सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेको हिसाब गर्ने हो पनि लघुवित्त संस्था, गैरसरकारी संस्थामा समुदायमा बसेर लामो समय काम गरिसकेको अनुभव मसँग छ । यसबाट समुदायका मानिसँग धेरै घुलमिल भएको हुनाले समाजमा कस्ता मानिस हुन्छन् र उनीहरूको समस्या, आवश्यकता राम्रोसँग पहिचान गर्न सक्छु । मैले वडाको जिम्मेवारी पाउँदा पनि म त्यसलाई राम्रोसँग बहन गर्न सक्छु । समाज राम्रोसँग पढेको छु । समाजको अवस्था र चरित्र राम्रोसँग बुझेकाले त्यसलाई चिरफार पनि गर्न सक्छु । त्यसो भएको समस्याको पहिचान गरी त्यसलाई सम्बोधन गर्ने सीप पनि छ ।
युवा अवस्थामा नै राजनीतिमा हाम फालेर वडाको नेतृत्व गर्न अगाडि बढ्नु भएको छ । वडाका धेरै युवा कि त विदेश, नभए शहर केन्द्रित भएका छन् । केही सीमित युवा बाहेक गाउँ युवा विहीन छ । युवालाई गाउँमै राख्न सक्ने गरी रोजगारीको केही खाका छन् तपाईँसँग ?
हाम्रो देश कृषिप्रधान देश हो । कृषि प्रधान देश भइरहँदा पनि कृषि तथा पशुपालन व्यवसायीक बन्न सकेको छैन । कृषिमा उत्पादनको आधारमा अनुदानको व्यवस्था गरी उत्पादनको बजारीकरण गर्न सहजिकरण गरिनेछ । लगानी अनुसारको प्रतिफल आउन नसकेमा त्यसको नोक्सान वडाले व्यहोर्नेछ । कृषिसँगै खेलकुदको क्षेत्रमा पनि राष्ट्रिय स्तरको खेलमैदान निर्माण गरि वडालाई खेलकुद पर्यटन विकास गर्नुका साथै गाउँमै खेलाडी उत्पादनमा समेत जोड दिइनेछ । पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गरी युवालाई पर्यटन उद्योगमा जोडीनेछ । म आफैं पनि युवा क्षेत्रको एउटा उदाहरण हुँ । गैरसरकारी संस्थामा राम्रो तलब सुविधा लिइरहेको म त्यो छाडेर व्यवसायीक कृषिमा लागेको छु । यो ठाँउमा कृषिको क्षेत्रमा राम्रो सम्भावना छ । त्यो संभावनाकै कारण गाउँमै कृषि रोजगारीमा युवालाई जोडेर विदेशिनु पर्ने दिनको अन्त्य गरिनेछ । त्यसकै नेतृत्वमा म आएकाे छु । युवाहरुलाई विभिन्न राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरुमा सहभागी गराइने छ भने गाउँलाई खेलकुद हबको रुपमा समेत विकास गरिनेछ । म कम्प्युटर र मोटरसाइकल समेत चलाउन सक्ने हुनाले कर्मचारि नहुँदा समेत कार्यालयको काम गर्न र गाउँका समस्यामा तत्काल पुग्नुपर्ने अवस्थामा सहयोगीको समेत आवश्यकता पर्दैन ।
पार्टी फुटेको छ । अघिल्लो निर्वाचनको उम्मेदवार पनि अर्कै दलमा गएर उम्मेद्वार बन्नुभएको छ । यसले पार्टीलाई कत्तिको असर पारेको छ ? कार्यकर्ता कत्तिको उत्साहित भएर लागीरहेका छन् ?
संगठनको हिसाबले अरुले कमजोर आँकलन गरेपनि हामी मजबुद छौं । पार्टी फुटको हामीमा असर छैन । हामी आन्तरीक संगठन निर्माण मजबुद छौं । फेरी युवा नेतृत्व भएको कारण सबै युवाहरु र पार्टी कार्यकर्ता पनि उत्साहीत भएर हिडेका छौं । समग्रमा हामी सानोसिरुवारीको लागि बलियो शक्ति हौं । हिजोको मतपरिणाम हेर्दा पनि हामी दोस्रो भएका कारण हामी बलियो नै छौं । हामी कसैलाई हिलो छ्यापेर वा नङ्ग्याएर आफु अब्बल भइन्छ भन्ने कुरामा विश्वास लाग्दैन । तरपनि आम जनताको सद्भाव युवावर्गमा रहेकोले सबैको साथ हामीमा छ । सबैको साथ र समर्थनले हाम्रो जित सुनिश्चत छ ।
विकास भन्नेवित्तीकै हाम्रोतिर डोजर लगाउने, आफ्नो मान्छेलाई ठेक्का दिने, आफ्ना मान्छेले केही कमाउन सक्ने योजनामा मात्रै बजेट हाल्ने प्रचलन छ । यसलाई मात्रै विकास सोच्ने आम बुझाइ छ । तपाईंको बुझाइ पनि त्यहि छ की अली फरक छ ?
यसमा मेरो मत फरक छ । भौतिक पुर्वाधारको विकास मात्रै विकास नभएर आम मानिसको चेतनास्तरको विकास पनि विकास हो । कुन काम गर्दा कति जना लाभान्वीत हुन्छन्, त्यसलाई मध्यनजर राखेर विकास गरिनुपर्छ । कुनै संरचना भत्काएर मात्रै विकास हुन्छ भन्ने परिपाटी अन्त्य गर्दै कुनै संरचनाको निर्माण गरिसकेपनि संरक्षण पनि विकास हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्नुछ । विकासको नाममा रहेको पुरातवादी सोच अन्त्य गरी मानव सुचकाँकको अवस्था हेरेर यहाँका गरिब जनताको स्थीतीमा परिवर्तन आउने गरि सिप विकास गर्न पनि जरुरी छ । उनीहरुको आर्थिक सुधार गरी शिक्षा, स्वास्थ्यमा गुणस्तरीय सेवा लिन सक्ने गरी विकास गर्न जरुरी छ । डोजरले पहाड फोरेर माटो बगाउने कुरामा मात्रै विकास नमानी एकीकृत विकासको बाटोमा हामी लाग्नेछौं । सबै जनताको स्थीतीमा परिवर्तन आउनेगरी कृषि क्षेत्रको विकास गरी उत्पादनमा जोड दिनु हाम्रो पहिलो गन्तत्य हुनेछ ।
वडामा ४ जनाको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी छ । उमेरको हिसाबले कान्छो र अध्ययनको हिसाबले जेठो उम्मेदवार हुनुहुन्छ । के फरक अरु उम्मेद्वार र तपाईँमा ?
अरु उम्मेद्वार भन्दा काम र अनुभवको हिसावले म अगाडि नै छु । सामजिक क्षेत्र, संघसंस्था, कृषिको क्षेत्र लगाएतमा मैले काम गरिसकेको छु । अध्ययनमा पनि म नै अगाडि नै छु । बालबालीका, युवा, जेष्ठ नागरिक लागाएत सबै उमेरसमुहको मानिससँग घुलमिल हुनसक्ने क्षमता मसँग छ । अर्को कुरा विकासको मोडेलको हिसाबमा पनि लामो समय लघुवित्तको क्षेत्रमा पनि काम गरेको हुनाले आर्थीक व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ, स्थानियलाई कसरी आर्थिक उपार्जनको क्षेत्रमा जोड्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान पनि मसँग छ । म आफैं पनि युवा उद्यमी भएको युवाहरुलाई कसरी उद्यमशील बनाउन सकिन्छ भन्ने ज्ञान पनि मसँग छ । अरुको हिसावले सामाजिक क्षेत्रमा म निश्कलंक छु । अन्य उम्मेदवारहरुको विभिन्न गलत हर्कतका बारेका प्रश्न उठ्दा उहाँहरु नाजवाफ भइहरनुभएको छ । मेरो त्यो अस्था छैन । युवाहरुको आशा र भरोसाको केन्द्र भएर म अहिले अगाडि बढीरहेकोले म अरु उम्मेदवार भन्दा अब्बल छु ।
तपाईको विकासका प्रमख एजेण्डा के के छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य लगाएत आधारभुत कुराहरुमा के के योजना बनाउनुभएको छ ?
शिक्षा क्षेत्रमा भौतिक संरचनामा भन्दा पनि शैक्षिक गुणस्तर निर्माणमा हाम्रो प्रमुख जोड रहनेछ । अहिले हाम्रो समाजमा शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीहरुविच समन्वयकारी भुमिकाको अभाव देखिएको छ । यसलाई अन्तक्र्रियात्मक रुपमा अगाडि बढाएर सबैको एकआपसमा रहेको समस्या पहिचार गरि त्यसलाई समाधान गरिनेछ । विद्यालयमा शुल्क लिनु विद्यालयको बाध्यता छ । अब विद्यालयलाई आफ्नो जग्गा वा लिजमा जग्गा लिएर भएपनि उत्पादनमुखी बनाएर त्यसबाट विद्यार्थीहरुलाई पनि पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रममा जोडेर विद्यालयको र विद्यार्थीको पनि आयआर्जनमा जोड दिइनेछ । आधारभुत शिक्षालाई निशुल्क उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्था लागु गराइनेछ । त्यसैगरि विद्यार्थीहरुलाई पाठ्यक्रमको ज्ञान मात्रै नभएर व्यवसायीक, प्राविधिक लगाएत जिवनोपयोगी ज्ञान दिलाइनेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि ५० वर्ष भन्दा माथीका नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा मार्फत निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गराउनेछौं । बिमा बापतको शुल्क पनि वडाले नै व्यहोर्नेछ ।
महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविका सीप विकास गरी घरघरमा स्वास्थ्य उपचार गराउने र बेलाबखत डाक्टर सहितको टोलीले घरमै गएर स्वास्थ्य जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । हजार दिनका आमा बच्चालाई विशेष प्याकेज मार्फत स्वास्थ्य सेवा दिइनेछ । सरकारले दिने निशुल्क औषधी अहिले पर्याप्त छैन, त्यसलाई नियमीत गरिनेछ । एक घर एक धाराको अवधारणा पुरा गर्नेछौं । सर्वसुलभ मुल्यमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराइनेछ ।
अब नयाँ सडक खन्ने भन्दा पनि भएका सडक स्तरोन्नती गर्ने हाम्रो प्राथमिकता हुनेछ । कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकता दिइनेछ । आवश्यकताका आधारमा कृषि सिंचाइको प्रबन्ध गरी बाँझो रहेका जमिनमा व्यवसायिक कृषी उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । कृषि र पशुबिमा गराई किसानको उत्पादनको संरक्षण गरिनेछ भने बन्यजन्तु आतंकबाट पनि किसानलाई मुक्त गराउन विशेष योजना ल्याइनेछ । खोला किनारहरुमा विजुलीको व्यवस्था गरी हिँउदमा समेत पानी तानेर खेती गर्न सकिने बनाउनेछौं । कल्लेरीका जनतालाई सहज सडक पुर्वाधार मार्फत वडा कार्यालयसम्म जोडीने छ । त्यसको लागि बाह्रैमहिना सहज सञ्चालन हुने द्रुतमार्गको निर्माण गरिने छ । कल्लेरीका जनतालाई वडा कार्यालय टाढा भएका अनुभुति गर्न दिइनेछैन ।
नगरपालिकाले पर्यटकिय क्षेत्रको रुपमा पहिचान गरेका स्थलहरु पनि यहाँ छन् । ति बाहेका नयाँ पर्यटकिय स्थलको पहिचान र संरक्षण गर्ने योजनाहरु पनि छन् की?
नगरकै प्रमुख पर्यटकिय स्थलको रुपमा चिनीएको धार्मीक स्थल भदौरे गणेशलाई नगरमा मात्रै नभई देशमै प्रख्यात बनाउन प्रचारप्रसार व्यापक बनाइने छ । प्राकृतिक पर्यटकिय स्थलको रुपमा रहेका भुतछाँगा झरनालाई भनि राष्ट्रिय स्तरमा परिचित गराई पर्यटक भित्राउन विशेष प्रयास गरिनेछ । धेरै भन्दा धेरै पर्यटक भित्राएर खानीगाउँमा घले संस्कृती र मगुवामा मगर संस्कृती सहितको होमस्टेल सञ्चलन गरिनेछ । यसबाट स्थानियको आर्थिक उपार्जनमा टेवा पुग्नेछ । धार्मीक पर्यटन, खेलकुद पर्यटन र पर्यापर्यटनलाई विशेष जोड दिइनेछ । पर्यटकिय क्षेत्रहरुको प्राकृति स्वरुपको संरक्षण गर्दै विकास गरिनेछ ।
महिला, अपाङ्ग, बालबालीका लगाएत पछाडी पारीएका बर्गको विकासमा तपाईंको के भुमिका रहन्छ ?
यहाँका महिलाहरुले धेरै सिपमुलक तालिम लिएको भएपनि स्रोतको अभावमा त्यसले निरन्तरता पाउन सकेको छैन । कच्चा पदार्थ र बजारीकरणको पनि व्यवस्था हुन नसक्द ती सिप त्यसै खेर गइरहेको छ । उनीहरुलाई विउपुँजीको व्यवस्थापन गराई बजारसम्म पनि जोड्न सहजीकरण गर्नेछौं । कृषि, लघुउद्यमबाट उत्पादन हुने सामग्रीहरु ब्राण्डीङ गरी वडाले नै संकलन गरि बजारसम्म पु¥याइने छ, यसबाट उनीहरुको आयआर्जन बृद्धि हुनेछ । फुर्सदको समय सदुपयोग गरी गलैंचा, ढाका, स्विटर बुनाइ लगाएतका काममा जोडीनेछ । अपाङ्ग, बालबालीकाहरुको लागि उनीहरुकै मागको आधारमा क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । अब बन्ने भौतिक संरचनाहरु अपाङगमैत्रि र बालमैत्री बनाइनेछ ।
हामी अन्त्यमा आइसकेका छौं । तपाईं निर्वाचित भएर आएपछि जनताले तपाईंबाट के कुराम विशेष अपेक्षा गर्न सक्छन् ?
हाम्रो वडालाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाइने छ । वडामा सुशासनका सबै मापदण्ड लागु गरिनेछ । हरेक वर्ष नयाँ बजेट तर्जुमा गर्दा टोलटोलमा पुगेर त्यहाँको आवश्यकता संकलन गरी प्राथमिकीकरण गर्दै योजना बनाइनेछ भने आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हरेक योजनाका वास्तवीक आम्दानी खर्च विवरण भेलामार्फत सार्वजनिक गरिनेछ । कुनैपनि आयोजना सञ्चालन गर्दा त्यसले पार्ने प्रभावको पुर्ण अध्ययन गरिनेछ । जनप्रतिनिधि शासक होइन, सेवक हुन् भन्ने उदाहरण यस चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाबाट दिइनेछ । साथै सबै दलसँग मित्रवत व्यवहार गरि छलफल मार्फत वडा सञ्चालन गरिने छ र भष्ट्रचारमा शून्य सहनशिलता अपनाइने छ । अध्यक्ष भएपश्चात जनताको बजेट हिनामिना र अनियमितता हुन नदिन चुनावमा भएका प्रचारप्रसार खर्चिलो गरिएको छ । म आफैं कम्प्युटर र मोटरसाइकल समेत चलाउन सक्ने भएकोले कर्मचारी नहुँदा पनि प्राविधिक काम रोकिने छैन । अन्त्यमा भदौरे गणेश साक्षी राखी भ्रष्टाचार नगर्ने प्रण गर्दछु । एक भोट दिएर मलाई काम गर्ने मौका दिनुहोस् म कसैलाई निरास हुन दिने छैन । सानोसिरूवारि वासिको विकासको लागि अहोरात्र लागिरहने छु ।